I-Cosmogonies yaseMandulo yaseYiputa
Ama-cosmogonies aseYiputa ayengakumbi malunga nokuchazwa komyalelo wehlabathi (umntu onguMaat ), ngokukodwa ukunyuka kwelanga kunye nokukhukula kweNayile , kunokudalwa kwabantu. Ihlabathi liza kuqhubeka nokuqhubela phambili ngokulungelelananga kungakhathaliseki ukuba ngaba abantu abathandayo bahlala okanye bafe, nangona ookumkani kunye namakhosikazi, njengemvelo yoothixo, babalwa, kunye neenkolelo zonqulo ziye zanceda ukugcina umyalelo.
Ngethuba leminyaka apho iYiputa yamandulo yayinamandla aseMedithera ukuba ibaleke, iintlobo ezahlukahlukeneyo zavela kumandla, ezinye zaseAfrika, zaseAsia, kwaye emva koko, amaGrike namaRoma. Esinye isiphumo sexesha elide, eliyingcipheko yamandla aseYiputa luhluke kakhulu kwiimbali zaseYiputa zasendulo. Tobin ["Mytho-Theology EYiputa YaseYiputa," ngoVincent Arieh Tobin. I-Journal ye-American Research Centre eYiputa (1988)] ithi iintlobo ezahlukahlukeneyo ezibonakalayo eziphikisanayo kunye neentlobo ezibonisa ukuphikisana ezihlukeneyo zisetyenziselwa "ukuchazela into efanayo," kunokuba zilandele iingxelo ezicacileyo malunga nendlela indalo ivele ngayo. Ezimbini zeenguqu ezingezantsi zithixo welanga njengomdali. Inguqu engabhalwanga ngezantsi, kwi-Elephantine, inombumbi njengonkulunkulu wendalo.
Kwakukho iintlobo ezi-3 zendalo zaseYiputa, ezibizwa ngokuba ziothixo kunye neendawo ezibandakanyekayo, ezanceda ukuvakalisa iingxelo zezopolitiko zezi zixeko:
IHermopolis - I-Hermopolitan Ogdoad,
Heliopolis - I-Heliopolitan Ennead, kunye
Memphis - I-Memphite Theology.
Ezinye iidolophu zazinokwakheka kwezityalo eziye zanceda ukuphakamisa isimo semeko. Enye inkulu, kodwa i-theology yayingumfutshane yayibizwa ngokuba yi-monotheism yexesha le-Amarna.
Apha uya kufumana ulwazi olunxulumene neengongoma ezintathu eziyinkokheli zaseYiputa kunye noothixo abakhulu. Yiya kumanqaku axhumene noluhlu oluthe xaxa ngolwazi olungakumbi kunye neenkcukacha.
1. Ogdoad waseHermopolis
I-Hermopolis kwimaphu yeYiputa yamandulo, evela kwi -Atlas ye-Ancient and Classical Geography , nguSamuel Butler, u-Ernest Rhys, umhleli (Suffolk, 1907, u-1908). KwiNdawo yoLuntu. Ngokunyanisekileyo kweMaphu yaseAsia Minor, iCaucasus kunye namazwe angumakhelwane
Oothixo abali-8 be-Ogdoad yaseHermopolitan babedlelane ngamabini emibini. Bonke bavelisa ihlabathi, kodwa ngokuqinisekileyo oko bakwenzayo bahluka ngokuchazela, ngakumbi kunokohluko phakathi kwamagunya ase-8. Basenokuvelisa ubunzima okanye iqanda okanye ilanga. Nangona i-Ogdoad ingenakuba yinto ehamba phambili kwi-cosmology yaseYiputa, oothixo kunye noothixokazi bayo, bacingelwa ukuba bavelise oothixo kunye noothixokazi be-Ennead yeHeliopolis.
IHermopolis (Megale) ligama lesiGrike kulo mzi obalulekileyo wase-Epper Egypt. I-Hermopolis yayiyindawo apho izithixo zoothixo zivelisa ubomi okanye ilanga okanye nantoni na, ibe kamva yaba yidolophu ebalulekileyo kwihlabathi elimanyeneyo, kunye neendlu zeetempile ezivela kwiinkonzo ezahlukeneyo, kunye neempawu zenkcubeko ezivela kumaGrike namaRoma.
U-Thoth (okanye u-Amun) ubizwa ngokuthi uvuselela oothixo bokuqala be-chaos ukudala ubunzima obukhulu. UThoth uchazwa njengonkulunkulu wenyanga, unkulunkulu we-cosmogen, unkulunkulu weendudumo nemvula, unkulunkulu wolungisa, kunye nomphathi wabalobi. UThoth ungunkulunkulu wezithunywa zaseYiputa. Kaninzi "
2. I-Ennead yeHeliopolis
Inkcukacha yePiramidi Umbhalo ovela kwiTomb yeTeti I, iSaqqara (iNtloko yesi-6, iNkcazo yokuQala ephakathi kweYiputa). LassiHU
I-Ennead yeHeliopolis yasungulwa ngexesha lexesha elidala loBukumkani baseYiputa ngamabingeleli e-On, isixeko esingcwele kunkulunkulu welanga; ngoko, igama eliqhelekileyo elinguGrike elithi Heliopolis. Amandla okudala kunye nonkulunkulu welanga i-Atum-Re eyenziwe (ngokupaka okanye ukuhlambalaza) uShu noTefnut, isibini sesibini nesibhinqa eso sizukulwana esiqhelekileyo singenzeka. Ngokwempawu, indalo iphindwa rhoqo ngosuku xa ilanga (unkulunkulu) liphuma.
Imibhalo yePiramidi ibhekisela ekutyalweni koothixo kunye nehlabathi elikwazisa iCosmogony yeHeliopolis.
Ra. IC Flickr Umsebenzisi uRalph Buckley
I-Atum-Re nguThixo onguMdali we-Heliopolitan cosmogony. Wayeyithanda kakhulu uyise ka-Akhenaten. Igama lakhe lidibanisa oothixo ababini, u-Atum, unkulunkulu ovela emanzini amakhulu ukudala abanye oothixo, kunye noRe, oyisithixo soothixo baseYiputa.
3. I-Memphite Theology
Ukusuka kwiTye leShaako. I-CC Flickr yomsebenzisi kevan
I-Memphite theology ibhaliwe ngelitye elingama-700 BC, kodwa umhla wokudalwa kwe-theology uxoxwa ngazo. I-theology isebenza ukuba igwebe iMemphis njengedolophu yaseYiputa. Yenza u-Ptah unguThixo ongudali.
I-Shabako Stone, ehlala kwi-Museum Museum yaseBrithani, ngenxa yesipho esivela kwenye yokhokho ka-Princess Diana, iqulethe ibali likaPtah lokudalwa koothixo kunye ne-cosmos. Kaninzi "
Hieroglyph yasePtah. CC Flickr Umsebenzisi weepramramidonxts
U-Ptah unguThixo onguMdali we-Memphite theology. UHerodotus wayecinga ukuba nguYeifestus uguqulelo lwamaYiputa. I-Ptah ivame ukubonakaliswa igqoke ikhanda lekrele. Wadala ngegama. Kaninzi "
UJane Fonda kunye nee-POWs: Omnye kweZithathu
Funda nge-Inversion yeHrama